सरकारले तोक्यो विद्युत प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक, को हुन उनी ? — Imandarmedia.com
सरकारले तोक्यो विद्युत प्राधिकरणको नयाँ कार्यकारी निर्देशक, को हुन उनी ?
काठमाडाैं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणको निमित्त कार्यकारी निर्देशकमा लेखनाथ कोइराला तोकिएका छन्। ऊर्जा मन्त्री वर्षमान पुनले बाह्रौं तहका उपकार्यकारी निर्देशक लेखनाथ कोइरालालाई निमित्त कार्यकारी निर्देशक तोकेको ऊर्जा मन्त्रीका प्रेस संयोजक दयानिधी भट्टले बताए।
निवर्तमान कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङकाे कार्यकाल सकिएसँगै कोइराला निमित्त कार्यकारी निर्देशक बनेका हुन्। घिसिङलाई ऊर्जामन्त्री पुनले सोमबारको मन्त्रिपरिषद बैठकमा अर्को कार्यकालका लागि नियुक्तिको प्रस्ताव लैजाने भनिए पनि बैठकमा कुलमानको नाम गएको थिएन। प्राधिकरणबाट मंगलबार कुलमानको विदाई भएको थियो ।
जाँदा जाँदै के भने कुलमानले ? यस्तो छ उनको बिदाई मन्तब्य
मंगलबार कर्मचारीले राखेको विदाइ कार्यक्रममा कुलमान घिसिङ ।
अन्त्यमा सम्पूर्ण नेपाली जनता मेरो प्रेरणाका स्रोत हुन् । आगामी दिनमा मेरा सम्पूर्ण प्रयासहरु नेपाल र नेपाली जनताको समृद्धिको चाहना पूरा गर्नेतर्फ केन्द्रित रहने छन् ।